Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarunta cusun ee wasaaradda maaliyadda - Somalia Focus
Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarunta cusun ee wasaaradda maaliyadda
by Hassan Ali | Thursday, Oct 27, 2016 | 161 views
27,Oct,2016(SofoNews) Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Maanta xarigga ka jaray dhismaha Wasaaradda Maaliyadda oo ka kooban dhowr dabaq oo si casri ah loo dhisay, isagoo kormeerray qeybaha xaruntaasi ay ka koobantahay.
Munaasabadda waxaa ka qeyb-galay wasiirro, Duqa Muqdisho, taliliyeyaasha Ciidanka iyo ganacsato Soomaaliyeed oo ah kuwa bixiyay qaar ka mid ah Canshruucta lagu dhisay dhismaha.
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in mid ka mid ah Lixdii tiir ee ay ku dhisneyd Dowladdiisa uu yahay horumarka iyo dib u habeynta siyaasadda Maaliyadda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in Soomaaliya ay gaartay nidaamka Tiknoolajiyadda Maaliyaddeed ee dunida ay ku shaqeyso, waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay soo gabagabeysay tijaabadii uu Caalamka geliyay oo haddii ay dhammaato Dalka laga cafin doono lacago deymo ah oo gaaraya Shan Bilyan oo dollar.
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa mar kale ugu baaqay shacabkiisa in ay isku tashadaan oo ay u midoobaan sidii ay Dalkooda u dhisan lahaayeen.
Wasiirka Maaliyadda Maxamad Ibraahin “Fargeti” ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay dadaal balaaran ugu jirto sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka, wuxuuna dhismaha xarunta wasaaradda ku tilmaamay guul isoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna duqa Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale, ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ku dadaallaan bixinta Canshuurta, isagoo sheegay in la dhisay Waddooyin laami ah oo ay ku baxday Afar Milyan oo dollar oo ka timid Mashruuca Dalkaaga dhiso waa hantidada Dadka Soomaaliyeed ee Gobolka Banaadir.
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidamo Soomaali ah la geyndoono meelihii ay ka bexeen Itoobiyaanka.
Madaxweynaha Galmudug iyo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya oo kawada hadlay dagaalka Gaalkacyo